Kianjan’ny 13 Mai : Hanatevin-daharana ny mpiasam-panjakana -
AccueilRaharaham-pirenenaKianjan’ny 13 Mai : Hanatevin-daharana ny mpiasam-panjakana
Omaly mantsy, tsy navela niditra tao amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna indray ireo vahoaka mitolona manohitra ny hosoka sy ny hala-bato nandritra ny fifidianana farany teo. Vao maraina, tany amin’ny 6 ora sy sasany tany dia efa nobahanan’ireo mpitandro filaminana teo amin’ny Parvis. Izany hoe, izy ireo sy ny fiarabeny, ary ireo 4×4-n’ny Emmo no nibahana sy nameno ny kianja tamin’izany. Noho izany, tsy nisy tafiditra tao ireo vahoaka fa tety ivelany avokoa no nanohy ny fihetsiketsehana amin’ny fanoherana ny tsy rariny, amin’ny alalan’ny hosoka sy ny hala-bato. Narantirantin’izy ireo ho hitam-poko, hitam-pirenena ihany koa ny sora-baventy manambara fa “Tsy mendrika ny vahoaka ny fifidianana maloto”, “Izahay tsy manaiky ny halatra sy hosoka”, “Tokony hijoro amin’ny fahamarinana ny HCC, ary tsy tokony hitanila”,…